Alahady 23 Aogositra 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady 23 Aogositra 2020
"Mahatoky hatramin’ny fahafatesana ny mino."
Alahady 23 Aogositra 2020. Ao anatin’ny fotoana fankalazana ny faha 52 taonan’ny Fjkm moa ankehitriny. Atoa Andriamasinoro Tantely no nitarika ny fotoana. Atoa Razafindrakoto Alain sy Rtoa Razafindrakoto Tatamo no nanao ny vavaka sy ny vakiteny ary ny mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitondra ny hafatra.
Ny Salamo 63 : 1-5 no novakiana niderana an’Andriamanitra ary ny hira FFPM 201 : 1, 4 no notanterahina hiderana Azy. Nanao ny vavaka fisaorana sy fiderana an’Andriamanitra ny mpitarika taorian’izany.
Atoa Rakotoharisoa Michel, biraon’ny Sampana Sekoly Alahady no nanatanteraka ny fotoana.
Vavaka no nanombohany ny fotoana ho an’ny ankizy. « Izaho no Mpiandry Tsara; ary fantatro ny Ahy, sady fantany Aho ». Izany teny ao amin’ny filazantsara Jaona 10 : 14 izany no tenin’Andriamanitra nozarainy tamin’ny ankizy.
Izay mamboly paiso dia paiso no mivoaka, paoma dia paoma ary ny fiofanana ataon’ny miaramila dia mba ahavita ny andraikitra zay tokony ho sahaniny izy. Toy izany koa isika ankizy, mianatra ny Soratra masina satria mba ho mendrika tokoa isika eo amin’ny fiainantsika.
Fantatr’i Jesoa isika ka na aiza misy antsika dia miahy antsika hatrany isika amin’ny fiainantsika rehetra.
Raiso ary hianaro ny boky lesona satria ny tenin’Andriamanitra irery ihany no ahafahana mifandray aminy.
Nofaranany tamin’ny vavaka ny fotoana ho an’ny ankizy.
Natao ny hira Ffpm 207 : 1, 2 mialoha ny vavaka sy ny famakiana ny Soratra masina. Ny perikopa anio moa dia ny I MPanjaka 19 ; 1-10, Lioka 9 : 18-22 ary ny II Timoty 4 : 9-18.
Natao ny hira Ffpm 210 : 5 mialoha ny hafatra.
AF mahatahiry ny finoana, mifankatia, miasa amin’ny fahazotoana.
Ny hafatra entin’ny mpitandrina dia nalaina tamin’ny filazantsara Lioka 9 : 18-22.
Ity perikopa ity dia taorian’ny namahanan’i Jesoa ny olona 5 arivo lahy.
Raha nisinda tamin’ireo vahoaka maro ireo Jesoa dia nitsapa ny fandraisan’ireo vahoaka an’i jesoa Kristy. Nametrahan’i Jesoa fanontaniana na ny mpianatra na ireo vahoaka nadray fahasoavana taminy ireo.
MIsy fanontaniana 2 :
Fantatry ny olona tokoa ve ny Tompo
Ahoana no nanambarany ny tenany
Valinteny tsara no azo tamin’ireo. Nisy valinteny maro azo tamin’izany hoe iza moa Jesoa :
Jaona mpanao batisa hoy ny sasany (rehefa tsy teo intsony Jaona mpanao batisa fa notapahandoha dia hoe i Jaona io miverina io indray)
Elie mpaminany io
Ny fijerin’ny olona dia efa efa nitsangana tamin’ny maty Izy ary olona tsy iharan’ny fahafatesana intsony.
Ny mpianatra kosa dia nilaza azy toy izao hoe Izy no Kristin’Andriamanitra. I Petera no nitondra ny tenin’ny mpianatra.
Fantatra amin’izany fa ny teny fikasana izay nomena ny vahoakan’Andriamanitra dia ho tanteraka.
Ahoana no nanambaran’ny Tompo ny aminy
Niainga avy amin’izay niheveran’ireo vahoaka sy mpianatra ireo no nambarany. Nitondrany hevitra lavitra kokoa izany. Misy finoana ny amin’ny fahamarinan’ny teny fikasana.
Nambarany voalohany fa zanak’olona Izy : Daniela 7 : 13 dia manondro ilay zanak’olona. Hilazany ny fisandratany any amin’ny voninahitra sy ny fihaviany ary entiny hanambarany ny fifonana ataony ho an’ny olona mpanota nefa mino Azy. Entiny milaza ny fanetre-tenany izany rehetra izany. Tonga ny fotoana ahatanterahan’ny teny fikasany
Nambarany fa izany Mesia izany dia ho ampijaliana sy ho vonoina noho ny mba hanafahany ny fahotan’ny olona
Hitsangana amin’ny maty Izy amin’ny andro fahatelo. Io dia araka ny fitsanganana amin’ny maty voalaza amin’ny fanekempinoana. Ny momba Azy manontolo dia milaza ny amin’ny andro farany.
Ary amiko sy aminao hoy ny mpitandrina dia toy inona no handraisanao Azy ?
Amin’izao fiainantsika izao dia misy rivotra mitsoka ny hoe Jesoa dia mahavita fahaganana manala olana fotsiny eo amin’ny fiainana. Raha izay fotsiny manko dia mitovy amin’ireto vahoaka nanatrika Azy ireto isika. Raha izay fotsiny dia tsy ampy satria mbola misy ilay Mesia nijaly, ho faty nirahin’Andriamanitra.
Misy ihany koa manko ny finoana hoe Ilay razambazahy ve no handeha ho lazaina fa mpamonjy. Aiza ho aiza koa ary isika amin’izany ?
Amin’izao 52 taonan’ny Fjkm izao dia ahoana ny finoanao ?
Kristy ilay zanak’olona tonga ho mpamonjy ve no ifikiranao amin’izany mba hanome fiainambaovao ho anao ?
Mahatsiaro ny asa nataon’i Paoly ny amin’ny fanorenam-piangonana ny mpitandrina ka mahatsiaro ny tatitra rehetra nataon’i Paoly.
Indraindray tokoa isika dia rehefa misy fahasahiranana dia tena mahatsiaro tokoa amin’ny Tompo ary miantoraka eo amin’ny hazo fijaliana mihitsy, nefa rehefa afaka ny olana dia adino ny Tompo.
Mila matanjaka ny finoantsika ka ifikitra Aminy hatrany, na amin’ny tsara na amin’ny ratsy.
Taorian’ny hafatra dia nisy feonjavamaneno fohy ary nanao ny anjara hirany ny RFF.
Nanao ny vavaka ho setrin’ny tenin’Andriamanitra sy fifonana ny mpitarika.
Rehefa izany dia natao ny vavaka fanekem-pinoana laharana voalohany.
Natao avy hatrany ny vavaka fangatahana ny fitahiana izay nofaranana tamin’ny Rainay izay any an-danitra.
Natao ny hira Ffpm 480 : 2 mialoha ny fanononana ny tondrozotra. Nomena ny tsodrano ary ny hira Ffpm 427 : 1, 2 no namaranana ny fotoana.
Nikirakira ny feo : RANDRIAMAHEFA Tianarivony